Itoobiya oo markii ugu horeysay taariikhda yeelatay Raisul Wasaare Muslim ah – Xeernews24
Itoobiya oo markii ugu horeysay taariikhda yeelatay Raisul Wasaare Muslim ah
Sidda la wada saadaalinaayey Xisbiga haya talada dalka Itoobiya ee EPRDF ayaa siyaasiga Abiy Ahmed u doortay inuu noqdo guddoomiyaha xisbiga.
Talaabadan ayaa ka dhigan in maalmo ka dib uu noqon doono Raisal Wasaaraha xiga ee dowlada Itoobiya.
Abiy waa Muslim ka soo jeeda Qowmiyada Oromada oo ah tan ugu wayn dalka Itoobiya.
Waa nin dhalinyaro ah oo 41 sano jir ah, haysta shahaadada Phd, isagoo darajada Colonel ka gaadhay ciidamada dalkaas, wuxuuna mar soo noqday Wasiirkii Sayniska iyo Teknolajiyadda ee dowlada Itoobiya.
Abiy Ahmed ayaa noqonaya raisul wasaarihii ugu horeeyey ee isagoo muslim ah xilkaas ka qabta dalka Itoobiya taariikhda casriga ah.
Demeke Mekonnen Hassan oo isna ka soo jeeda qowmiyada Amxaarada ayaa ku-xigeenkiisa loo doortay.
Maalmaha soo socda ayaa si rasmi ah loogu dhawaaqi doonaa Abiy Ahmed inuu noqdo raisul wasaaraha Itoobiya, isagoo bedelaya raisul wasaarihii hore ee dalkaas Haile Mariam Desigln oo dhowaan xilkaas iska casilay ka dib markii ay kordheen rabshadaha ka dhacayey dalkaas ee looga soo horjeeday siyaasadaha qaar ee dowlada.
Mekonnen isna waa Muslim ka soo jeeda Gobolka Wallo, Wuxuu horey u ahaa Raisal wasaare ku-xigeenka dalkaas.
Awoodda siyaasadda ugu saraysaa ee dalka Itoobiya ayaa waxaa si buuxdda gacanta ugu dhigey dad ka soo jeedda Mulimiinta Itoobiya sida la wada ogyahay sargaalka ugu sareeya ciiddamadda Itoobya isna waa muslim lagu magacaabo Yusuf Samoora oo ka soo jeedda Qowmiyadda Tigreega.
https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2018/03/abiy.png 492 615 admin https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/06/xeernews-1.png admin2018-03-28 01:16:192018-03-28 01:16:19Itoobiya oo markii ugu horeysay taariikhda yeelatay Raisul Wasaare Muslim ah
DAAWO;- Daraasad wax Lagu sheegay soo Bandhiga Nidaamka Maamul Wanaag Ee Laamaha... Marwada Jabuuti Ayaa Ilaa $2 Milyan Ku kharash Garaysay In Muuse Soo Baxo.